No. 1719, Thursday, February 15, 2018 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 1719, Thursday, February 15, 2018
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁ ရက် (ကြာသပတေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၈)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ချစ်သူများနေ့ကို ကမ္ဘာ တစ်လွှားက ချစ်သူများ ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြ သည်။ အချို့က ဈေးဝယ်စင်တာမှာ၊ အချို့ က ပန်းခြံထဲမှာ၊ အချို့က နေအိမ်မှာ၊ အချို့ က နှစ်ယောက်တည်းရှိသည့် ခေတ္တချစ်ရိပ် မြုံထဲမှာဖြစ်သည်။ သို့သော် မပန်းအိမွန်နှင့် မချစ်စုတို့သည် ချစ်သူများနေ့ကိုဆင်နွှဲရန်ကမ္ဘာတစ်လွှားက စုံတွဲများ မသွားချင်သည့် နေရာသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ချစ် သူနှစ်ဦး အမှုရင်ဆိုင်နေရသော ရန်ကုန်မြို့ ရှိ တရားရုံးတစ်ခုတွင် ချစ်သူများနေ့ကို ဆင်နွှဲ ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနှင့် အပေါင်းပါများအမှုတွင် တရားလိုနှင့် တရားလိုပြသက်သေတို့ကို စစ်ဆေး
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း အမှုတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အခွင့်အာဏာအရ တရားစွဲဆိုခွင့် ရသည့် ၁၉၂၃ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေအတွက် တရားလိုနှင့် အခြားအမှုများ၏ တရားလိုပြသက်သေ စုစုပေါင်း နှစ်ဦးကို ယမန်နေ့က စစ်ဆေးခဲ့ သည်။ ၁၉၂၃ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေအတွက် တရားလို ရဲမှူးကျော်လွင်ဦးနှင့် မူးစိတ်အမှု၊ လက်နက်အမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးအမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေတို့အတွက် တရားလိုပြ သက်သေအဖြစ် နေပြည်တော်လေဆိပ်မှ လေ ကြောင်းရဲ ဒုရဲမှူးရဲရင့်ထွေးတို့ကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးကို PEN America က ဆုချီးမြှင့်
ဖမ်းဆီးခံ ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆောင်ရွက် နေသော PEN America အဖွဲ့က ၂၀၁၈ ခုနှစ် PEN/Barbey Free-dom to Wirte (လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်) ဆုချီးမြှင့်သည်။ အဆိုပါဆုသည် လွတ်လပ် စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် တားမြစ်ခံရသော ဖမ်းဆီးခံသတင်း ထောက်များကို နှစ်စဉ်ပေးလေ့ရှိ ပြီး ၂၀၁၈ မေလ ၂၂ ရက်တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ အမေရိကန်သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်တွင် ကျင်းပမည့်အခမ်းအနား၌ ဆုပေးအပ်မည် ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို လမ်းတွင် တံတားခြောက်စင်း တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်း
တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင် အိုတို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေခြင်း ကြောင့် မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ပရာ ဘွမ်-ပူတာအိုလမ်းပေါ်ရှိ တံတား ခြောက်စင်း တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်ကို ရက်အကန့်အသတ် မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ကချင်ပြည် နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက် အောင်က ပြောကြားသည်။
ဒီနေ့ရုပ်ရှင်အကြိုကဏ္ဍမှာတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုအက်ရှင်ဇာတ် ကားကြိုက် ပရိသတ်တွေအတွက် တောင်ကိုရီးယားဇာတ်ကားသစ် လေးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကလေးစစ်သားဟောင်းအောင်ကိုထွေးကို တရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုဖြင့် ထောင်ခြောက်လ ချမှတ်
ကလေးစစ်သားဟောင်း အောင်ကိုထွေးကို တရားရုံးမထီ မဲ့မြင်ပြုမှုနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ ထောင်ဒဏ် ခြောက်လကျခံစေ ရန် တရားလိုပြသက်သေနှစ်ဦးကို နေ့ချင်းစစ်ဆေးပြီး ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) တရားရုံးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် အမိန့်ချသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင် RFA သတင်းဌာနအား ကလေး စစ်သားဟောင်း အတွေ့အကြုံများဖြေကြားသည့် အောင်ကိုထွေး ကို တရားရုံးကနိုင်ငံတော်အ ကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မဖြင့် စွဲ ချက်တင်ပြီးနောက် စွဲချက်တင်အမိန့်ချသည့် တရားသူကြီးကို‘‘နွားတရားသူကြီး’’ ဟု အောင်ကိုထွေးက တရားရုံးလျှောက်လမ်းတွင် အော်ဟစ်ပြောဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းသို့အမိန့်ချခြင်းဖြစ်သည်။ အောင်ကိုထွေးကို တရားစီ ရင်မှုဆောင်ရွက်နေသော ပြည် သူ့ဝန်ထမ်းအား တမင်စော်ကား ခြင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ၀င်ရောက် နှောင့်ယှက်ခြင်းပုဒ်မ ၂၂၈ ဖြင့် စစ်ဆေးမည်ဟု တရားရုံးက စာပို့ အကြောင်းကြားထားပြီး ဖေဖော် ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် တရားလိုပြ သက်သေအဖြစ် ယင်းတရားရုံး၏ ရုံးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို စစ်ဆေးကာ ဒုတိယ မြို့နယ်တရားသူကြီး (၁) က အမိန့်ချခြင်းဖြစ်သည်။ တရား လိုဖြစ်သူ မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးချစ်ကိုကိုသည် တရားရုံးသို့ လာရောက်ထွက်ဆိုခြင်းမရှိပေ။
အမျိုးသမီးကွန်ဒုံး အသုံးပြုမှုအပေါ် သိရှိသူနည်းပါးသေးဟုဆို
အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသိရှိသူ နည်း ပါးနေပြီး ယင်းသည် အမျိုးသား သုံးကွန်ဒုံးထက် အဆမတန်ဈေး ကြီးကြောင်း ကွန်ဒုံးသုံးရန် အသိ ပညာပေးသည့်အဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ ဒေါ်ယုယုဆွေက ပြောသည်။
ရွှေတောင်မြို့၌ မြေငလျင်အန္တရာယ် ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ပြီး နောက်နေ့၌ ငလျင်လှုပ်
ရွှေတောင်မြို့၌ မြေငလျင် အန္တရာယ် သဏ္ဌာန်တူ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ပြီး နောက်ရက် (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်) နေ့လယ် ၁ နာရီ၄၄ မိနစ်တွင် ရွှေတောင်မြို့နယ်ကို ဗဟိုပြု၍ ရစ်ခ်ျတာစကေး ၄ ဒသမ ၉ အဆင့်ရှိ အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ မြေငလျင်လှုပ်ခဲ့ သည်။ ပြည်မြို့၏ အရှေ့တောင် ဘက် ၉ မိုင်ခန့်အကွာ ရွှေတောင် မြို့နယ်ကို ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး ပြည်မြို့ဝန်းကျင်ရှိ သဲကုန်း၊ ရွှေတောင်၊ ပေါင်းတည်မြို့တို့တွင် သိသာစွာ ခံစားရကြောင်း ဒေသခံအချို့က ပြောသည်။
လူသုံးထောင်ကျော်ဖြင့် မြန်မာပြည်မြေပုံ ပုံဖော်မှု ဂင်းနစ်စံချိန် ချိုးနိုင်ခဲ့ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကို လူ ၃,၄၆၆ ဦးဖြင့် ပုံဖော်၍ ကမ္ဘာ့ ဂင်းနစ်စံချိန် ချိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာက ကြေညာ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်း သဘာဝသယံဇာတများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေခြင်းကို အမျိုး သားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်က ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး တွင် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းအဆိုကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ဦးက သုံးရက် တိုင် ဆွေးနွေးပြီးနောက်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် အချို့နှင့် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ် ၀န်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မှတ်တမ်းတင်ရန် အဆိုပြုသော်လည်း စက်ခလုတ်နှိပ် မဲခွဲအတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လစ်လပ်ဝန်ကြီး နှစ်နေရာအတွက် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းနှစ်ဦး အဆိုပြုခံရ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတွင် လစ်လပ်နေသော ၀န်ကြီးနေရာများ အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကို ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ် စား တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက် တာခင်မောင်အေးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် တိုင်းလွှတ်တော်အရေး ပေါ်အစည်းအဝေး၌ အဆိုပြု တင်ပြခဲ့သည်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံမှ ငါးဝယ်ယူမှု မတ်လမှစ၍ ယာယီရပ်ဆိုင်းမည်
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများမှ ငါးဝယ်ယူမှုကို လာမည့် မတ်လ ၁ ရက်မှစ၍ ယာ ယီရပ်ဆိုင်းမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံငါး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းကြိုင်က ပြောသည်။
မူဆယ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ ၁၀ လကျော်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ ငါးဘီလီယံ ခန့်ရှိ
၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ၁၀ လကျော်အတွင်း မူဆယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်မှ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ ငါးဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၁၈ အခွန်အကောက်ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်း
၂၀၁၈ ပြည် ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပ ဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ကိုယ်စား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက ယမန်နေ့က ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် တင် သွင်းသည်။
ပီအက်စ်ဂျီချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရပါက နေမာ ကို ထွက်ခွာခွင့်ပေးမည်ဟုဆို
ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနေမာ အနေဖြင့် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းချန် ပီယံလိဂ်ဖလားရရှိရေး ကူညီနိုင် ပါက ၎င်းကိုအသင်းပြောင်းရွှေ့ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပီအက်စ် ဂျီအသင်းတာဝန်ရှိသူများကပြော ခဲ့ကြောင်း Goal သတင်းဝက်ဘ် ဆိုက်က ဖော်ပြသည်။
ယူရိုပါလိဂ် (၃၂) သင်းအဆင့်တွင် အက်သလက်တီကို၌ ကော်စတာမပါဝင်
သောကြာနေ့ နံနက်အစောပိုင်းယှဉ်ပြိုင်မည့် ယူ ရိုပါလိဂ်နောက်ဆုံး (၃၂) သင်းအ ဆင့်တွင် ကိုပင်ဟေဂင်အိမ်ကွင်း သို့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ပွဲ အတွက် အက်သလက်တီကို၌ အဓိကတိုက်စစ်မှူးကော်စတာ ပါဝင်မည်မဟုတ်ဘဲ အော့စတာဆန့်အသင်းသို့ သွားရောက်ရင်ဆိုင်ရမည့် အာဆင်န
အောင်လံတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
အောင်လံမြို့နယ် တွင် အသက် (၅၀)အရွယ် အမျိုး သားတစ်ဦး ၎င်း၏နေအိမ်၌ ကြိုးဆွဲချသေဆုံးမှု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး စကားများရာမှ ကတ်ကြေးဖြင့်ထိုး
သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးသဖြင့် အမျိုးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဘောလုံးကန်နေစဉ် စကားများကာ ဓားထိုးမှုဖြစ်
ဆယ်ကျော်သက်အ ရွယ်လူငယ်နှစ်ဦး ဘောလုံးကန် နေစဉ်စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဓား ထိုးမှုဖြစ်ပွားသဖြင့် လူငယ်တစ် ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
သားကို မီးပူဖြင့်ကပ်သည့်မိခင် အမှုဖွင့်ခံရ
အိမ်မှ ငွေခိုးသည်ဆို ကာ အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ်သား ဖြစ်သူကို မိခင်က မီးပူဖြင့်ကပ် ဆုံးမသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပူ လောင်ဒဏ်ရာများရရှိကြောင်း ပုလဲအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ တာ ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကစားသမားများအာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းချက်ကြောင့် ရန်ကုန်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ဟု ဘာလီနည်းပြ၀န်ခံ
အေအက်ဖ်စီဖလားပြိုင် ပွဲအုပ်စုအဖွင့်ပွဲတွင် ကစားသမား များအာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းချက် ကြောင့် ရန်ကုန်အသင်းကို အိမ် ကွင်း၌ ရှုံးနိမ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဘာလီယူနိုက်တက်နည်းပြ ၀ီဒိုဒို က ပြောသည်။
မြန်မာလိဂ်ချန်ပီယံရှမ်းယူနိုက်တက် ပြည်တွင်းနည်းစနစ်ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ရှာဖွေနေ
မြန်မာလိဂ်လက်ရှိချန်ပီ ယံရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းသည် နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာရာထူးအ တွက် သင့်လျော်မည့်သူကို ရှာဖွေ နေကြောင်း ရှမ်းယူနိုက်တက်မန် နေဂျာဦးခင်မောင်ထွန်းက ပြော သည်။
ပြည်ပကစားသမားလေးဦး ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပါက စာချုပ်ဖျက်သိမ်းမည်ဟု ရှမ်းယူနိုက်တက်နည်းပြချုပ်ပြော
မြန်မာလိဂ်လက်ရှိချန် ပီယံရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းက ယခုနှစ်ရာသီတွင် ခေါ်ယူထား သည့် ပြည်ပကစားသမားလေးဦး ခြေစွမ်းပြသနိုင်ရန် ရုန်းကန်နေ ရပြီး ရာသီဝက်ပြီးဆုံးသည်အထိ အသင်းနှင့်အထိုင်မကျပါက စာ ချုပ်ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အသင်းနည်းပြချုပ်ဦးစိုးမြတ်မင်း က ပြောသည်။
အောင်သူကို ထိုင်းလိဂ်ပထမပတ် အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားအဖြစ် Goal.com ရွေးချယ်
မြန်မာတိုက်စစ်မှူး အောင်သူကို လန်ဒန်မြို့အခြေ စိုက် နာမည်ကြီးအားကစား ၀က်ဘ်ဆိုက် Goal.com က ထိုင်း လိဂ်-၁ ပထမပတ်၏ အကောင်း ဆုံးလူငယ်ကစားသမားအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်များ တိုက်ရိုက်ပြသမှုကို ပေါင် ၄ ဒသမ ၄၆၄ ဘီလီယံဖြင့် ရောင်းချ
၂၀၁၉-၂၀၂၂ ပရီးမီး ယားလိဂ် သုံးရာသီပွဲစဉ်များကို ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် တိုက်ရိုက်ပြသ ရေး အစီအစဉ်ခုနစ်ခုအနက် အစီ အစဉ် (Packages) ငါးခုကိုပေါင် ၄ ဒသမ ၄၆၄ ဘီလီယံဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပြီး ကျန်အစီအစဉ်နှစ်ခု ရောင်းချရန် ကျန်နေသေးသည်။
ဂျူဗင်တပ်နှင့် စပါးသရေကျ၊ အဝေးကွင်းတွင် မန်စီးတီးဂိုးပြတ်အနိုင်ရ
ချန်ပီယံလိပ် (၁၆)အသင်းအဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်တွင် ဂျူဗင်တပ်သည် အိမ်ကွင်း၌ ပွဲအစ ၉ မိနစ်အတွင်း နှစ်ဂိုးပြတ် ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ချေပဂိုးများ ပြန်လည် ခွင့်ပြုခဲ့ရသဖြင့် စပါးနှင့် နှစ်ဂိုးစီ သရေကျခဲ့သည်။